Ukuphonswa kwesihlabathi - JJD MACHINERY CO., LTD.
Imishini YJJD CO., LTD.
I-JJD ibineminyaka emashumi amabili embonini yokwakha isihlabathi yethusi. Sikhiqiza ikhwalithi ephezulu, ingcindezi yokujikijela okuqinile ngesikhathi nangesabelomali. Abasebenzi bethu abaqeqeshiwe kakhulu bazosebenzisana nenkampani yakho ukunquma impahla efanelekayo nephethini ukubhekana nezidingo zakho zokuphosa isihlabathi sethusi.
Abasebenzi bethu abazinikele bazosebenzisa ubuchwepheshe babo ukusakaza umkhiqizo wakho wethusi bese benza usiki bemishini nokuhlangana. Umgomo wethu ukusiza inkampani yakho ukuthi ikhiqize insimbi yethusi esebenza ngokufanele futhi engabizi kakhulu edlula okulindelwe. I-JJD ihlinzeka ngezinsizakalo ezigcwele ezithuthukisa inqubo yokuphonsa kwesihlabathi sethusi kanye nemishini yokusebenza esitolo esisodwa.
Ikheli:# 105-113, Liantang Rd, North Industrial District, Jimei, Xiamen, China
Ucingo:Sishayele manje: 0086-18250811386
Ukuthuthukiswa kanye nokusebenza kweJJD kugesi ...
Isigaba Sokucwaninga Nentuthuko i-JJD sesisungule iphrojekthi yokuthuthukisa isikhunta kanye nenqubo yokuphonsa i-aluminium alloy casting, futhi nange-Pressurization ye-inert-gas, ukuxazulula ngokuphelele ...